एकाबिहानै गोलि हानि हत्या गरिएका फिदाको शव अस्पतालबाटै गायब ! - Kendra Khabar
एकाबिहानै गोलि हानि हत्या गरिएका फिदाको शव अस्पतालबाटै गायब !
२०७५, ५ मंसिर बुधबार ०४:४५
बुधबार बिहान अज्ञात समूहको गोली लागि एक इँटा भट्टाका सुपरभाइजरको मृत्यु भएको छ।
दुवही नगरपालिका-९ मा अज्ञात समूहले प्रहार गरेको गोलि लागि इँटा भट्टाका सुपरभाइजर ५४ वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको हो। अज्ञात समूहको गोली लागि गम्भीर घाइते भएका हुसेनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सुनसरीका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुँयालले जानकारी दिए।
अस्पतालले मृत घोषणा गर्नेबितिकै एक समूहले जबरजस्ती शव लगेर गएको न्यूरो अस्पतालका निर्देशक रन्जित बस्नेतले जानकारी दिए । देब्रे छातीमा गोली लागि मृत्यु भएका हुसेनको शव पोष्टमार्टम गर्नुभन्दा अगावै गायव भएपछि अस्पतालमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ।
बुधबार बिहान मर्निङ्ग वाकको गएका हुसेनमाथि मोटरसाईकलमा आएका २ जनाले गोली प्रहार गरि फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। गत असोज ४ गते पनि अज्ञात समूहले सुनसरीमा गोली हानी हसिद कुर्सित अन्सारीको हत्या गरेको थियो।
गोली चलाउने व्यक्तिहरुको खोजि कार्य तिब्र पारिएको डिएसपी फुँयालले बताए।